मोटो पैसा लिएर यौ’न स’म्ब’न्ध राखिन्, त्यसपछि ग्रा’ह’क’लाई ब’ला’त्का’र’को आ’रो’प लगाइन् – ABC NEWS 24
मोटो पैसा लिएर यौ’न स’म्ब’न्ध राखिन्, त्यसपछि ग्रा’ह’क’लाई ब’ला’त्का’र’को आ’रो’प लगाइन्
काठमाडौं। एक सेसनको लागि २३ हजार रुपैयाँ लिने एक महिला थेरापिस्ट प’क्रा’उ परेकी छिन् । उनी आफ्ना ग्राहकसँग यौ’न स’म्ब’न्ध बनाएका कारण प’क्रा’उ परेकी हुन् । यो घ’ट’ना अमेरिकाको राज्य मिनेसोटाको हो । क्रि’मि’नल से’क्सु’अ”ल क’न्ड’क्ट’को लागि दो’षी पाइएमा ४३ वर्षकी क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट महिला जोहन्ना ली मेमलाई १५ वर्षको जे’ल स’जा’य हुन सक्छ ।
पुलिसले उनलाई ११ अक्टोबरमा प’क्रा’उ गरेको थियो । पछि उनलाई १ करोड १४ लाख रुपैयाँ (१ लाख डलर) ध’रौ’टी लिएर छाडिएको छ । डेलीमेलको रिपोर्ट अनुसार यी महिलाले झुटो बोल्दै ग्राकमाथि ब’ला’त्का’र’को आ’रो’प लगाएकी थिइन् । मिनियापोलिस स्टार ट्रिब्युनका अनुसार यो घ’ट’ना’को खुलासा त्यतिबेला भएको थियो जब यी महिलाले अगष्टमा पुलिसलाई बोलाएर ग्राहकले आफूलाई ब’ला’त्का’र गरेको भनेकी थिइन् ।
महिलाले पुलिसका जाँच अधिकारीहरुसँग ग्रा’ह’क’ले आफूसँग अफेयर भएको बताउन सक्ने पनि भनेकी थिइन् । पुलिसले उनका ग्राहकसँग सोधपुछ गर्दा उनले आफूहरुबीच करिब ४ महिना सहमतिमै यौ’न स’म्ब’न्ध रहेको बताए । यौ’न स’म्ब’न्ध’को सुरुवात थे’रा’पी सेसनबाटै भएको थियो । पी’डि’त ग्राहकले पुलिसलाई म्यासेज र भ्वाइसमेल पनि देखाए । जब पुलिसले महिलाको फोनको जाँच गर्यो तब उनले ग्रा’ह’कसँगका अधिकांश म्यासेज डि’लिट गरेको थाहा भयो । पछि प्रमाण भेटिएपछि उनले ग्रा’ह’क’सँग आफ्नो स’म्ब’न्ध भएको स्वीकार गर्दै उनले आफूलाई कहिल्यै ब’ला’त्का’र नगरेको बताइन् ।
← जय पाथिभरा माता सबैको कल्याण गर्नुहोस ! भगवानको शक्ति छ यो ठाउमा , १० बर्ष देखी पालेको रोग चवाटटै भयो (भिडियो सहित)
गुडिरहेको बसभित्रै ब’ला’त्का’र ! त्यही बसमा यात्रा गरिरहेका ४५ यात्रुले कसरी थाहा पाएनन् ? →